Haweenay is qashay si ay u dhasho kaddib markii ay weyday qof caawiya - BBC News Somali
Haweenay is qashay si ay u dhasho kaddib markii ay weyday qof caawiya
Haweenay u dhalatay dalka Tanzania oo 30 sano jir ah ayaa qalliin isku samaysay iyada oo joogta gurigeeda oo ku yaalla miyiga kaddib markii ay u suuragali weysay inay si caadi ah ku dhasho, sida sargaalka ka tirsan waaxda caafimaadka ee magaalada Dr Hashim Movogogo u sheegay BBC-da.
Joyce Kilinda ayaa iyadoo isticmaalaysa sakiin isku samaysay qalliin.
Haweenaydan ayaa ka tagtay isbitaal ku yaalla magaalada Kirando, iyada oo ay foosha hayso kaddib markii ay dareentay in la dayacay, sida lagu sheegay wargayska ay dowladda leedahay ee Daily News.
Muddo dheer ayey codsanaysay caawimaad balse ma aysan helin wax jawaab ah.
Ms Kilinda iyo cunugga waa ay badbaadeen waxaana hadda lagu daryeelayaa xaruun caafimaad, ayuu yiri Dr Movogogo.
Sida la sheegay waa ilmihii siddeedaad ee ay haweenaydan dhashay balse waa kii ugu horreeyey ee ay ku dhasho qaab qaliin ah.
Nin la dilay isaga oo ku guda jira qalliin uu wajiga isaga badalayay
Saynisyahanno ayaa sheegaya in joogteynta qallinka dumarka lagu sameeyo marka ay dhalayaan uu cawaaqib xumo ku yeelanayo horumarka uu jirka bani aadmigu sameeyo.
Su'aasha ay saynisyahannadu is weydiinayeen muddo dheer ayaa ah sababta aysan miskaha dumarku wakhtiga intaa le'eg u korin. Arrintaas ayaa lala xiriirinayaa ayadoo hooyooyinku ay hidde-sidayaashooda u gudbiyaan gabdhaha ay dhalaan, jiilba jiil, ayadoo dhinaca kalena carruurta dhalata marba marka ka dambaysa ay noqonayaan kuwo kobocsan oo caafimaad qaba.
Is le'ekaansho la'aantaas ayaa la leeyahay waxay sababtaa in dumarka qaar ay door bidaan in ilmaha lagu qalo ayagoo ka cabsi qaba inay umul raacdaan, oo ilmuhuna ku dilmaan.